Goadelopa: Lafo loatra ny lasantsy, mikatso ny nosy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2008 8:40 GMT
Taorian'ilay fikatsoana tanteraka nitranga tany Goyana Frantsay, dia anjaran'i nosy Karaiba Frantsay ao Goadelopa indray no nifoha tamin'ny torimasony.
Ilay nosy miendrika lolo ampifanohizan'ny tetezana tahaka ny “le Pont de la Gabarre” sy ny “le Pont de l'Alliance” no voly tanteraka tamin'ny andaniny roa: Grande-Terre sy Basse-Terre. Gwada ao amin'ny Bienvenue sur Karukéra[Fr] no miresaka ny fampikatsoan'ny mpamily fiarakodia ny lalan-dehibe rehetra manerana ny nosy:
Nandritra ny roa andro izay dia nikatso tanteraka ny lalana fizorana rehetra. Napetraka tamin'ny kihondalana sy ny lalana lehibe teto Goadelopa ny fanakanan-dalana: Montebello, Capesterre, Gourbeyre, Baillif, La Boucan… any Basse-Terre; La Jaille, La Voie Verte, Saint-Félix, Morne à l'Eau… kosa any Grande -Terre….
tena tsy afa-mifamoivoy mihitsy e! afa-tsy amin'ny lala-madinika (tahaka ny lalam-pasika aty amintsika any anindrana)…
Nanomboka tamin'ny alatsinainy (8/12) ity raharaha ity rehetra nanapa-kevitra ny hametraka sakana manerana ny lalana lehibe eto amin'ny nosy hanoherana ny fahalafosan'ny lasantsy ny mpamily fiarabe, fiara fitaterana ary ny fiara mpitondra mpianatra. Sahala ny tany Goiana Frantsay, manontany tena ihany koa ny Goadelopeana ny antony mahatonga ny lasantsy tsy midina nefa mba re ihany fa efa nisy fihenany be ny vidin'ny solika isaky ny baril.
Tamin'ny Alakamisy (04/12), taorian'ny fanapahan-kevitry ny governemanta voaterin'ny krizy tany Goyana, dia nahita ny fidinan'ny lasantsy ho 1.36 euros isaky ny litatra fa tsy 1.51euros toy ny teo aloha intsony ny Goadelopeana , saingy mbola tsy mahafa-po izany raha ampitahaina amin'ny vidin'ny lasantsy izay 1 euro ny litatra any Frantsa tanibe ankehitriny.
Izany moa dia miankina, mazava loatra, amin'ny vidin'ny lasantsy apetraky ny governemanta Frantsay. Manazava ny kajikajy izay sarotra izany i Gwada eto :
Aoka aloha ho fantatrao… fa aty amin'ny deparitemanta ampitandranomasina, dia feran'ny didy apetraky ny prefe ny vidin'ny lasantsy, mitovy ny vidiny, na iza mpaninjara, na aiza na aiza ny toerana izarana azy. Sarotra ny mahazo ny fametrahana izany kajikajy izany, ary tsy avoakan'ny mpaninjara koa. Tsy misy ny fifaninanana, eo ambany maso tsara tso-dranon'ny fanjakana izany….
Entiny hanehoana ny tsy fitovian-kevitra sy ny tsy fahazoana ny antony (mahalafo ny solika) dia nanapa-kevitra ny hanao barazy amin'ny lalana io andro alatsinainy io ny mpampiasa ny lalana ho fidiram-bolany. Taorian'ny “Alatsinainy matroka” ary dia nanomboka niresaka azy ity ny tontolom-bolongana Goadelopeana sy ny fampahalalam-baovao hanazava ny anton'ny hetsika sy nanome soso-kevitra na torolalana ialana amin'ny barazy raha hivezivezy eto amin'ny nosy. Géraldine any Goadelopa ao amin'i La Gwada bloquée no miteny ny fahasarotana azo raha mankany Jarry ankehitriny:
Mbola hiverina indray ry zalahy androany ary hiaraka amin'ny mpanao fitaterana indray. Hihamafy ny fanakanan-dalana. Raha jerena ny sarintany dia tsy misy intsony ny hevitra andehanana lavitra mihoatra an'i Jarry foana tanteraka nefa io no faritra ara-toe-karena lehibe indrindra eto amin'ny nosy.”
Ny antony mivandravandra ampikatsoana an'i Jarry moa dia mba ho hita kokoa ny hetsika – saingy ny tsy hita miharihary kosa indray toeran-tseranana sy misy ny orinasan'ny solika io Jarry io. Ny tena tanjona farany moa dia ny hanerena an'i “la SARA” – fanadiovan-tsolika TOKANA an'ny Compagnie Occidentale des Indes (teny frantsay kosa eto e?) – izay manao ampihimamba ny fanraharahana ny solika eto Goadelopa sy any Martinika. Araka ny efa nohazavan'i Gwada etsy ambony moa dia io ampihimamba io no mahatonga ny fiaraha-miasa tokana misy eo aminy sy ny prefe hametra ny vidin'ny lasantsy. Mahatsiaro ho natao ambaninjavatra matetika moa ny mpanao politika Goadelopeana eo amin'ny fanapahan-kevitra ka nisafidy ny hanohana ny mpanao fihetsiketsehana sy mba ho mpitondra tenin'ny vahoaka reehfa misy ny fifidianana.
Na ahoana na ahoana ny vahaolana ho azo, dia efa afaka mirehareha sahady ny mpanao fihetsiketsehana satria nanako nanerana ny sehatra nasionaly (tanibe sy ampitandranomasina) avy hatrany ny nataon'izy ireo. Ity lahatsary [Fr] avy amin'ny LCI, iray amin'ireo mpamoaka vaovao frantsay lehibe, dia porofo fa tsy mahazo mody fanina amin'izay fanoherana mitranga any amin'ny Frantsa ampitan-dranomasina i Frantsa Tanibe. Mycho, ao amin'i Critiqart Guadeloupe, izay miezaka ny manara-maso ny fizotry ny fihetsiketsehana isan'andro moa dia miandry ny kabarin'i Yves Jégo, Sekretaram-panjakana Frantsay misahana ny departemanta ampitan-dranomasina,izay heverina fa hiresadresaka amin'ny lalan'ny famelabelaran-kevitra an-dahatsary androany, mba hahenoana ny tolo-keviny hamahana ny olana.